यस कोरियाली कलाकार अनुसार तीन चरणमा कसरी सुन्दर फूलहरू चित्रण गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
कोरियाली कलाकार चरण-दर-चरण सिकाउँदछन् कसरी सुन्दर फूलहरू कोर्न
El पानीको रंगमा ती फूलहरू चित्रण गर्नेसँग त्यो छ, तर यदि ती तपाईंलाई सिकाउँदछन् कसरी र paint्ग गर्न को लागी केहि चरणहरू अनुसरण गर्न, सबै उत्तम। यस कोरियाली कलाकारले के गर्छिन् जसले उनको प्यान्सिल लिन्छिन र ब्रश लिन्छन् कदमहरू देखाउनको लागि ती सुन्दर फूलहरू कोर्न को लागी।
पेन्सिल र ब्रश कौशल सुधार गर्न एउटा तरीका विभिन्न प्रकृतिका क्यान्भासेजमा वा केवल पानीका रंगहरूका लागि तयार पानामा प्रकृति क्याप्चर गर्न शुरू गर्न। यो कलाकार Kate Kyehyun पार्क हो र उनी बोटानिकल बगैंचा चित्रका लागि चिनिने बाहेक, उनीसँग शिक्षण गर्ने र अरुलाई उस्तै नतीजाहरू प्राप्त गर्ने उत्कट चाहना छ।
Kate Kyehyun Park को इन्स्टाग्राम पृष्ठमा हामी बिरूवाहरू र उत्कृष्ट फिनिशका फूलहरूको चित्रको एक ठूलो श्रृंखला पाउन सक्दछौं, साथै राम्रोसँग। ट्यूटोरियलको श्रृंखला जुन प्रत्येक चरणहरू सिकाउँदछ ती सुन्दर र नाजुक फूलहरू चित्रकारी गर्न तपाईं के दिनुहोस्।
हामी तपाईले के सिक्न सक्दछौं भनेर कुरा गर्छौं रंग गुलाब, ट्युलिप्स वा क्याक्टिसबै प्रकारको फूलहरूको अर्को ठूलो श्रृंखला बाहेक। सत्य यो हो कि उसको ब्रशस्ट्रोक एकदम नाजुक छ र फूलको त्यो छापलाई समात्न कसरी सहि स्पर्शहरू दिने भनेर उसलाई थाहा छ जुन यस्तो देखिन्छ कि मानौं यसको पंखुड़ियों हावाको बलले खस्नेछ। यस कलाकार र ती मोटा ब्रश चराहरु रंग्न स्ट्रोक जस्तै।
सबै भन्दा राम्रो त्यो हो उसको ट्यूटोरियल धेरै सरल र स्पष्ट छ धेरै भ्रम बिना। तिनीहरूसँग तीन चरणहरू हुन्छन् जुन तपाईंले चाहानु भएको कुनै पनि फूल बनाउन तपाईंले अनुसरण गर्न आवश्यक छ। प्रारम्भिक स्केच जहाँ आकार कोरिएको हुन्छ, त्यसपछि ट्रान्सभर्स लाइनहरू र अन्तिम रेखाचित्रको आकारको साथ अन्तत: फूलको रंग र चित्र कोर्न।
हामी तपाईंलाई छाड्दछौं तपाईंको इंस्टाग्रामको साथ त्यसो कि उनलाई अनुसरण गर्नुहोस् र उनलाई नजिकबाट चिन्नुहोस् तपाइँको प्रत्येक शीर्षक यो सामाजिक नेटवर्क मा तयार छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » कोरियाली कलाकार चरण-दर-चरण सिकाउँदछन् कसरी सुन्दर फूलहरू कोर्न
जो म जस्तै, को आकर्षित गर्न को लागी कसरी कल्पना छैन को लागी एक महान सहायता!
टाटियाना भेलास्क्वेज भन्यो
हामीलाई चरणबद्ध चरण सिकाउन को लागी धन्यवाद, कसरी कोर्ने को लागी सिक्ने, मलाई कसरी चित्र बनाउने भनेर थाहा छैन तर यी पाठ्य सामग्रीहरूसँग मलाई थाहा छ कि म यसलाई प्राप्त गर्नेछु।
टाटियाना भेलास्केजलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई स्वागत छ! अभिवादन :)
यस एआई को धन्यवाद हामी तत्व हटाउन र इच्छा मा एक छवि मा राख्न सक्नुहुन्छ
IKEA को फन्ट फन्ट अहिले सम्म सिर्जना गरिएको सब भन्दा आरामदायक टाइपफेस हो